Fandraisana | Mpiara-miasa MyCoolClass
Ho an'ny mpampianatra,
MyCoolClass diafiaraha-miasa amin'ny mpampianatra iraisam-pirenena miaraka amin'ny sehatra fampianarana an-tserasera azy. We mifandray ireo mpampianatra tsara indrindra eran'izao tontolo izao miaraka amin'ireo mpianatra mazoto indrindra amin'ny toerana mahafinaritra sy misokatra ary samihafa kolontsaina. Inona koa, womena ny mpampianatra ny fotoana tompony ny toeram-piasan'izy ireo.
Amin'ny maha-koperativa mpiasa anay, izahay dia manaraka ireo fotopoto-pitsipika fito napetraky ny Alliance Cooperative Iraisam-pirenena. Izahay dia voasoratra anarana tany amin'ny Fanjakana Mitambatra ho fiarahamonina sy mpikambana ao amin'ny Koperativa UK.
Midira amin'ny #TEACHERREVOLT ANIO ANAO
Tombontsoa ho an'ny mpampianatra
Ianao no sefo. Malalaka ianao mamorona lesona ampianarinao amin'ny fombanao manokana. Mifehy ny famandrihana sy ny fandaharam-potoananao ianao ary mamaritra ny vidinao manokana.
Mora ny mitantana ny mpianatra amin'ny sehatry ny fampianarana.
Ny fizarana ny efijery, ny fitantanana ny fisie, ny fampiasana ny papa fotsy, ary ny fandaminana ny fitaovana dia tsotra sy intuitive. Hita amin'ny fiteny 10 izao ny sehatra ary efa an-dàlana izao!
Karama tsara kokoa, tombony tsara kokoa ary mangarahara tanteraka.
Ny mpampianatra dia mandoa ny 19% amin'ny vola miditra isam-bolana ao amin'ny kaoperativa. Manarona ny vidin'ny asa sy ny fandraisana anjara amin'ny vola ankapobeny hanampiana antsika hitombo. Ny ampahan'ny 19% dia mandeha koa amin'ny fotoana tsy andoavanao vola! Tsy manana tompon'andraikitra maka tombony izahay. Amin'ny maha-mpikambana anao dia manana ny orinasa koa ianao, ary mahazo miteny ny amin'izay mahazo ny tombom-barotra.
Hanangona 7 andro isan-taona ny mpampianatra amin'ny fialantsasatra marary na karama manokana arakaraka ny anjara birikiny sy ny karaman'izy ireo isan'andro. Tianay ny mpampianatra mba hikarakara ny tenany rehefa marary izy ireo na hanao vakansy tsy very vola. Izay apetrakao ihany no azonao esorina.
Tsy misy sazy na onitra amin'ny fanafoanana raha marary ianao na voan'ny vonjy maika.
Mitranga ny zavatra ratsy. Raha sendra vonjy maika ao an-trano ianao na mila miala sasatra andro vitsivitsy dia esory fotsiny ny kilasinao ary ampahafantaro ny ekipa mpanohana.
Amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza, na aiza na aiza
Miasa ny sehatra misy anao na aiza na aiza misy anao ary na aiza na aiza alehanao. Ny hany ilainao dia ny fifandraisana Internet. Miasa any Shina ihany koa ny sehatra misy anay ary tsy misy famerana.
Manampy amin'ny fanapahan-kevitra manapa-kevitra ianao.
Ny mpampianatra rehetra dia hanana fidirana amin'ny tranokala tokana ho an'ny mpikambana natokana ho an'ny mpiara-miasa, miaraka amin'ny fampahalalana ara-bola, ny lalàna ary ny fitsipika, ny mombamomba ny fifidianana, ny fitsapan-kevitra, sy ny maro hafa. Ny mpikambana rehetra dia afaka milatsaka ho filankevi-pitantanana.
Mamorona sy miara-miasa
Manomboha na midira ekipa famoronana ary manaova fampianarana miaraka amin'ireo mpampianatra hafa. Atolory ny fandaharam-pianaranao ho fankatoavana avy amin'ny Curriculum Board ary avy eo ny ekipa mpamolavola antsika dia hitondra ny fiainanao ho amin'ny fiainana! Ianao sy ny ekipanao dia hahazo valisoa rehefa amidy ny làlam-pianaranao!
Ampio ireo mila izany indrindra
MyCoolClass dia mikasa ny handefa programa hanomezana fampianarana maimaimpoana ho an'ireo ankizy sahirana ara-toekarena amin'ny famoronana vola tsy mitady tombom-barotra.
Fandefasana mora sy mahomby
MyCoolClass dia manana safidy isan-karazany amin'ny fandoavana vola mba hahazoana antoka fa voakarakara arak'izay tratra.
Tongasoa daholo ny mpampianatra.
Raha mahay mampianatra ireo lohahevitra atolotrao ianao dia tongasoa. Tsy raharahainay hoe iza ianao, avy aiza ianao, aiza ianao no mipetraka, na fiteny inona no teneninao. Tsy milay ary tsy misy toerana eo amin'ny fanabeazana ny fanavakavahana.
Raha tianao ny ataonay ary te haneho fanohanana ianao rehefa mihalehibe,
mankasitraka ny fanomezana ataonao.
Manomeza fanampiana amin'ny alàlan'ny GoFundMe
Manomeza amin'ny alàlan'ny PayPal
Mpiara-miasa amin'ny sehatr'asa ho an'ny mpampianatra
Marina izany !!! Ny mpampianatra rehetra dia lasa mpiara-miasa ary manana anjara amin'ny orinasa. Amin'ny maha kaoperativa azy dia tsy misy "Big Boss" na mpampiasa vola mandray ny fanapahan-kevitra rehetra. Ny mpikambana tsirairay dia manana ny anjarany ao amin'ny orinasa ary manana vato mitovy.
Fiaraha-miasa eo amin'ny Koperativa
Fandraisana anjara ara-toekarena
Fialan-tsasatra manokana karama
Fiofanana sy fanabeazana
Tsy misy ny politika Draconian
Mpiara-miasa amin'ny mpampianatra
Misorata anarana mba ho mpampianatra
© 2021 MyCoolClass Co-operative Limited | Zo rehetra voatokana.
Nisoratra anarana tany Angletera ho fiarahamonina voasoratra anarana ambanin'ny lalàna fiaraha-miasa sy fiaraha-miasa ho an'ny fiaraha-monina.
Volavola noforonin'i Elula
XMampiasa cookies amin'ny tranokalanay izahay hanomezana anao traikefa tena ilaina indrindra amin'ny fahatsiarovana ireo safidinao sy famerenana mitsidika. Amin'ny fipihana ny "Accept All" dia manaiky ny fampiasana ny cookies rehetra. Hamaky bebe kokoaKitendry Cookie Ekeo ny rehetra
Ny cookie dia sombin-tahiry kely (rakitra an-tsoratra) izay tranokala iray - rehefa tsidihin'ny mpampiasa - dia mangataka amin'ny tranokalanao hijerena ny fitaovanao mba hahatsiarovany ny mombamomba anao, toy ny tianao amin'ny fiteny na ny fampahalalana momba ny fidirana. Ireo cookies ireo dia napetrakay ary nantsoina hoe cookies an'ny antoko voalohany. Mampiasa mofomamy avy amin'ny antoko fahatelo izahay - izay cookies avy amina sehatra iray tsy mitovy amin'ny fonenan'ny tranonkala vangianao - ho an'ny doka sy dokambarotra ataonay. Azafady mba jereo ny politika fiarovana fiainan'olona hianaranao bebe kokoa momba ny fomba ampiasantsika cookies.
Mampiasa cookies izahay noho ny antony maro toy ny;
hampiasa singa ilaina amin'ny tranokala MyCoolClass,
hanatsarana ny zavatra niainanao amin'ny fampiasana MyCoolClass,
hahafantatra tsara kokoa ny fomba fampiasan'ny olona ny tranokala. Mety tafiditra ao koa ireo cookies avy amin'ny tranonkala media sosialy an'ny antoko fahatelo.
Azonao atao ny manova ny fikiranao cookie amin'ny fotoana rehetra amin'ny fanarahana ny torolalana eo ambanin'ny pejy ao amin'ny fizarana "Tantano ny cookies".
Inona no atao amin'ny mofomamy?
Mampiasa cookies sy teknolojia fanarahana hafa izahay amin'ireto tanjona manaraka ireto:
Mba hamakafaka ny fomba fitsidihan'ny mpitsidika anao, ny tranokalanay
Mba hamakafaka ny lazan'ireo kilasy sy taranja
Hanampy anay hanatsara ny votoatin'ny tranokalanay
Mitantana ny safidinao cookie
Azonao atao ny mampiasa ny safidinao amin'ny cookie ao amin'ny tranokala MyCoolClass, ary azonao atao koa ny mifehy ny cookies amin'ny alàlan'ny fikirakirana tranokalao. Ny ankamaroan'ny mpizaha tranonkala dia mamela fifehezana ny ankamaroan'ny cookies. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny cookies, ao anatin'izany ny fomba hahitana izay cookies napetraka, tsidiho ny www.aboutcookies.org na www.allaboutcookies.org
Fantaro ny fomba fitantanana cookies amin'ny browser malaza:
Raha te hahalala vaovao mifandraika amin'ny mpitety hafa dia tsidiho ny tranokalan'ny mpampivelatra fizahana.
Raha te hiala amin'ny fanarahana ny Google Analytics amin'ny tranokala rehetra dia tsidiho http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
_wpfuuid 11 taona Ity cookie ity dia ampiasain'ny plugin WPForms WordPress. Ny cookie dia ampiasaina hamelana ny kinova karama an'ny plugin hampifandray ny fidiran'ny mpampiasa iray ihany ary ampiasaina amin'ny fiasa fanampiny toa ny addon Form Abandonment.
jery_cookie_policy 1 taona Ny cookie dia napetraky ny plugin GDPR Cookie Consent mba hitahiry na nanaiky ny fampiasana cookies na tsia ny mpampiasa. Tsy mitahiry angona manokana.
_fbp 3 volana Ity cookie ity dia napetrak'i Facebook hanehoana doka rehefa amin'ny Facebook na amin'ny sehatra nomerika ampiasain'ny dokam-barotra Facebook, rehefa avy nitsidika ny tranokala.
fr 3 volana Facebook dia mametraka an'ity cookie ity hanehoana doka mifandraika amin'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fanarahana ny fitondran-tenan'ny mpampiasa manerana ny tranonkala, amin'ireo tranonkala manana piksely Facebook na plugin sosialy Facebook.
yt-remote-mifandray-fitaovana na oviana na oviana Ireo cookies ireo dia apetraka amin'ny alàlan'ny horonan-tsary youtube.
yt-lavitra-fitaovana-id na oviana na oviana Ireo cookies ireo dia apetraka amin'ny alàlan'ny horonan-tsary youtube.
_ga 2 taona Ny cookie _ga, napetrak'i Google Analytics, dia manisa ny angona mpitsidika, fivoriana ary fanentanana ary koa manara-maso ny fampiasana tranokala ho an'ny tatitry ny analytics an'ny tranokala. Ny cookie dia mitahiry fampahalalana tsy mitonona anarana ary manome isa namboarina kisendrasendra mba hahafantarana mpitsidika tokana.
_ga_QB4KJ2NX1F 2 taona Ity cookie ity dia napetrak'i Google Analytics.
Consent 16 taona 3 volana 26 andro 7 ora Ireo cookies ireo dia apetraka amin'ny alàlan'ny horonan-tsary youtube. Nosoratan'izy ireo ny angona statistika tsy fantatra anarana, ohatra, isaky ny hoe impiry no naseho ilay horonan-tsary ary inona no fanovana ampiasaina amin'ny playback. Tsy misy angona saropady angonina raha tsy miditra amin'ny kaontinao google ianao, raha izany dia ampifandraisina amin'ny kaontinao ny safidinao. raha tsindrio "tianao" amin'ny horonan-tsary.